NK | बम विस्फोटमा परि विप्लवकै विद्यार्थी नेताको मृत्यु, अरु को-को परे ? (नामावलीसहित )
बम विस्फोटमा परि विप्लवकै विद्यार्थी नेताको मृत्यु, अरु को-को परे ? (नामावलीसहित )
काठमाडौंको घट्टेकुलोमा बम विस्फोटमा परी मृत्यु हुनेको सनाखत भएको छ । आइतबार अपरान्ह लोकमन्जरी कार्कीको घरमा बम विस्फोट हुँदा प्रज्वल शाहीको मृत्यु भएको खुल्न आएको छ।
शाही नेत्रविक्रम चन्दसँग निकट बिधार्थी सङठनका केन्द्रीय सद्स्य हुन् । बम विस्फोटमा परी त्रिचन्द क्याम्पसका विप्लव पार्टीका विद्यार्थी नेता इकाई अध्यक्ष रविन केसी घाइते भएका छन् ।
घटनास्थलबाट विप्लव नेकपाको पर्चा भेटिएपनि ठाकुर भने सो पार्टीमा आबद्ध रहेको वा नरहेको खुल्न सकेको छैन्। घट्टेकुलोको घटनास्थलमा भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पर्चा भेटिएका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जेठ १३ गते नेपाल बन्दको आह्वान छ ।
दुबै घटनामा परी अहिलेसम्म ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ जना घाइते भएका छन्। यसअघि विप्लवले जेठ ८ गते निकालेको विज्ञप्तिमा केपी ओली सरकारले गरेको जघन्य घटनाको बदला जनताले उचित समयमा लिने नै चेतावनी दिएका थिए ।
प्रहरीले आफ्ना कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरेलाई भोजपुरमा हत्या गरेको भन्दै विप्लवले बदला लिने चेतावनी दिएका थिए ।